SP-L07 350ml Makaralı Mutauri App Kudzora Smart WIFI Aroma Diffuser, China SP-L07 350ml Makaralı Mutauri App Kudzora Smart WIFI Aroma Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
Minimum Order Yakawanda: 100 Pieces
Packaging Details: 18Pieces / katoni
Mitemo Yekubhadhara: 50% dhipoziti, 50% chiyero usati waendesa
350ml Makaralı Mutauri App Kudzora Smart WIFI Aroma Diffuser
Gadzira mararamiro anonhuwirira uye akasununguka
1.App Kudzora: chengetedza ese mashandiro eiyo inoparadzira nekadiki foni APP "Hydrone". Mushure mekuraira zvabudirira kutumirwa, iyo diffuser inomhanya isina foni APP pa. Hapana chikonzero chekufamba uchienda kuchigadzirwa kuti uchinje basa asi iwe unogona ikozvino kudzora ichi chakaparadzira neapp pafoni yako!
2.Bluetooth Mutauri Music Player: Inogona kubatanidza kune yeBluetooth chishandiso senge mafoni, mapiritsi uye makomputa kuraira mimhanzi yakasununguka. Chii chinopfuura mafuta diffuser uye humidifier, neichi chishandiso, icho zvakare chine mimhanzi player / mutauri kuti unganakirwe nekunhuhwirira kuburitswa kwairi asi zvakare inoridza iwe unofarira mimhanzi kubva kuchinhu.
3.Aromatherapy & Humification kuonekwa: Iyo yakakosha mafuta diffuser iyo ine mhute kuburitsa kwe0.035 marita pazuva. Inogadzira inonhuwirira nharaunda nayo paunenge uri kubasa kana munguva yako yekuzorora kuti ikubatsire kuzorora.
4.Safety: Yakagadzirwa ne auto-off basa, iyo diffuser inomira kushanda otomatiki kana mvura yapera, kana nguva yakwana.
5.Colorful Night Mwenje: Iyo ine mavara e-LED mwenje. Chiedza chinogona kutenderera ne7 mavara. Kana, inogona kuseta kune imwe yakatarwa ruvara.
6.Timer: Iine "MIST" bhatani, unogona kuseta 5 modhi timer 30 min, 60 min, 120 min, 180min uye inopfuurira. Munguva yenguva maawa 7-15.
chiyamuro AC100V-240V 50 / 60Hz
goho DC24V / 0.65A
zvinhu ABS + PC + PP
chiedza 7 yakajeka LED mwenje
Nguva 30/60/120 / 180min / ON
Saizi yeyuniti Φ14.3 * 17cm
Unit uremu 660g
Ruvara rwebhokisi saizi 15 * 15 * 17.9cm
nhuri 18 zvidimbu / katoni
Ukuru hweCarton 47 * 47 * 38cm
GW / katoni 13 Madzimabo